Printer ဆိုင် တစ်ချို့ …. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Printer ဆိုင် တစ်ချို့ ….
Printer ဆိုင် တစ်ချို့ ….
Posted by gyinkalay on Sep 3, 2011 in Computers & Technology |5comments
ကျွန်တော် Epson 121 တံဆိပ်3in 1 printer ၀ယ်ထားသည်မှာ တစ်လနှင့် ရက် 20 သာ၇ှိပါသေးသည်.။ ပရင်တာမှာ အခုဆို ချောင်ထိုးထား၇သည် ။ error မတ၇ားတက်သည်။ ကျွန်တော် ပရင်တာ အကြောင်းကောင်းကောင်းနားမလည်ပါ..သုံးတတ်တယ်ဆို၇ုံ လေးသာ၇ှိသည်။3in 1 ဆိုသည်မှာ colour print, copy ,scan သုံးမျိုးသုံးလို့ ၇သည် ဆိုသော ကြောင့် သဘောကျသော ကြောင့်ဝယ်ဖြစ်လေသည်။ ပြီးတော့ သူများပြောစကားများအ၇ printer ကို Inkbox ချိတ်လိုက်၇င် ဆေးဝယ်၇သက်သာသည် ဟု ဆိုသဖြင့် Inbox ပါ တခါတည်းချိတ်လိုက်သည်။ printer မှာပါသော အော်၇ယ်ဂျင်နယ် ကဒ်ထရစ် မှာ ဆေးကုန်လို့ အသစ် ပြန်ဝယ် လျှင် တစ်ဘူးကို သောင်းဂဏိန်း၇ှိသည်…colour နဲ့ ပါဆို မစားသာပေ၊၊ တစ်ဘူးဆို၇င်လဲ အ၇ွက် သုံးလေးဆယ်သာခံသည် ။ Inbox ချိတ်လိုက် လျှင် ဆေးကုန်လို့ ပြန်ဖြည့်ချင်လျှင် အေ၇ာင်တစ်ဘူးမှ တစ်ထောင်ကျပ်သာ ကျသည် ထို့ ကြောင့် တွက်ခြေ ပိုကိုက်သည်ဟု တွက်ကာ inbox ချိတ်လိုိက်လေသည်။ ပရင်တာ ဈေးနှုန်းမှာ 73000 ကျပ် Inbox ချိတ်တာက 15000 စုစုပေါင်း 88000 ကျပ် A4 တစ်အုပ်ဝယ်တာက 4000 ကျပ် တက္ကစီခ ဘာညာ အကုန်ပေါင်းလိုက်၇င် တစ်သိန်းနီးပါး သွားကျလေသည်။ ၀ယ်ပြီး အိမ်ေ၇ာက်တော့ မိတ္တူ ကို စစမ်းကြည့်လို က်တော့ error စတက်ပါလေေ၇ာ…ဆိုင်မှာတော့ scann နှင့် Print တော့စမ်းကြည့်လာသည်။ ဆိုင်မှာတုန်းက တော့ဘာမှမဖြစ် အိမ်ေ၇ာက်တာနဲ့ error က စတက်ပါလေရော.. သုံးရွက်လောက်ထုတ်လိုက် error က တက်လိုက် မိတ္တူ ကူးမယ်လုပ်လိုက် error တက်လိုက်နဲ့ စာရွက်တွေတောင် တော်တော်ကုန်သွားတယ်…ပြီးတော့ မိတ္တူက လဲသိပ်မထင်ဘူး..scan ကလဲ နဲနဲ ၀ါးတယ်..ထားပါတော့လေ…function များတော့ အဲ့လောက်တော့၇ှိမှာပေါ့ လေ လို့ သဘောထားကြီးလိုက်ပါတယ်..နောက်မှ တစ်ခု သတိ၇လိုက်တာက ငါ့ကို အော်၇ယ်ဂျင်နယ် ကစ်ထရစ်လဲ ပြန်မထည့်ပေးလိုက်ပါလား..ဆိုပြီးဆိုင်ကို ဖုန်းဆက်မေးတော့ ၀ယ်ကတည်းက အော်ရယ်ဂျင်နယ် ကစ်ထရစ်က မပါဘူးတဲ့ ထပ်ဝယ်၇တာတဲ့ ၀ယ်တုန်းက တော့ အဲ့လိုမပြောပါလား…အခု မှ တစ်မျိုး ။ တကယ်ဆို ၇င် စ၀ယ်ကတည်းက customer ကို အားလုံး ကြိုပြောထားသင့်ပါတယ်…Inbox ချိတ်မယ်ဆို၇င် error အတက်များမယ်…လို့ အော်ရယ်ဂျင်နယ် ကစ်ထရစ် မပါဘူးလို့ (သူများးဆိုင်တွေ ပါပါတယ်. သက်သက်မဲ့ ညစ်ပတ်တာပါ) အခုတော့ အော် ရယ်ဂျင်နယ် ကစ်ထရစ်လဲ မပါ error ကလဲတက် အခုဆို printer က ချောင်ထိုးရပြီ မှင် ဖိုး ကုန်မှာ ကြောင့်လို့ အလွယ်လိုက်ကာမှ ပိုက်ဆံတစ်သိန်းက ပလုံသွားကော…..အင်း…ပိုက်ဆံတစ်သိန်းကိုေ၇ထဲပစ်ချလိုက်ကာမှ ပလုံ ဆိုတဲ့အသံမြည်အုံးမယ်..အခုတော့ ဟင့်… ပ၇င်တာ ၀ယ်မယ်ဆို၇င်လဲ သေချာ ဆန်းစစ်ပြီးမှ ၀ယ်ကြပါ ကျွန်တော့်လို မခံလိုက်၇ပါစေနဲ့ …Inbox ချိတ်မယ်ဆို၇င်တော့ error ကတော့ တက်မှာသေချာပါတယ်…
ကျုပ်သုံးတဲ့ ပရင်တာတခုမှာလဲ ink box ချိတ်ထားပါတယ်။
(၁) ပရင်တာအသစ်ဝယ်သုံးရင် original catridge နဲ့ပဲသုံးသင့်ပါတယ်။ အဲဒီမှင်အိုးတွေကုန်မှ အဲဒီအော်ရီဂျင်နယ်အခွံကို ink box ချိတ်သင့်ပါတယ်။ အခုလို error တွေတက်နေတာ original catridge အခွံအသစ် မဟုတ်လို့ပါ။ ပရင်တာက အဲဒါကို detect လုပ်ပါတယ်။
(၂) ink box ချိတ်ရင် ရာနှုံးပြည့်အဆင်ပြေမယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ တချို့ဟာတွေရလိုက် တချို့ဟာတွေမရလိုက် နဲ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တနေ့မှာတော့ ဘာမှမဖြစ်ရင်တောင် မှင်ယိုပြီး ပရင်တာပျက်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ပရင်တာအသစ်ကို ink box ချိတ်တာ ကျုပ်တော့ သိပ်သဘောမကျဘူး။
(၃) ink box ချိတ်တာ များများပရင့်ထုတ်မယ့်သူ မှ သင့်တော်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အဲဒီ refill မှင်တွေ အိုးထဲမှာ တစတစ ခမ်းပြီး ပျစ်လာပါမယ်။ ပြီးရင် catridge ပျက်ပါမယ်။ ဇွတ်လုပ်ရင် ပရင်တာပါပျက်ပါမယ်။
(၄)3in 1 printer တွေဟာ ဆက်တင်တွေ ကိုယ်လိုချင်သလို ချိန်ဆပြုပြင်ဘို့ ခက်ပါတယ်။ မရတာများပါတယ်။ သုံးလို့မကောင်းပါဘူး။
ဒီအပေါ်ကပြောတာတွေကို ပရင်တာရောင်းတဲ့သူတွေကတော့ ငြင်းမှာပဲ။ ၀င်တောင် ဆဲဦးမလားမသိဘူး။
ကျုပ်ကတော့ ပရင်တာဒါဏ် တော်တော်ခံထားရသူမို့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကို ပြောတာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။သူပြောတာလေးတွေလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကို အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ဆိုင်တွေကမလိမ့်တပတ်လုပ်တာများလာပီ။လူပါးကို ဝတယ်။ဟွန့် 
ဆိုင်တွေကလဲ ကိုယ့်ပစ္စည်းထွက်ရင် စွံရင်ပြီးရော လုပ်တတ်လွန်းလို့ ဒုက္ခေ၇ာက်ရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ၊
ကျနော် တို့လဲ ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်လိုက်ပီဆိုရင် ဘုရားတရတော့တာပါပဲ။ အဆင်မသင့်ရင် တော့ ရေထဲ
ပစ်ချလိုက်တာကမှ ပလုံ မည်မဲ့အဖြစ်မျိုး ခံစားရတော့မှာ။
gyinkalay နဲ့ parlayar46 ပြောတာတွေကို မှတ်သားပြီး ဗဟုသတအနေနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ် … ကိုယ်တိုင်တော့ ပရင်တာမ၀ယ်ထားဘူး …ထုတ်စရာရှိလျှင် … ရုံးမှာ ထုတ်လိုက်တယ် ဟီးဟီး ။ ရုံးမှာ လေဆာဂျက်သုံးတယ်ဆိုတော့ … အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ထုတ်ဖြစ်တယ် … ကာလာပရင့်ကလည်း … မလိုဘူးဆိုတော့ ..ပရင်တာ ကိစ္စ ခေါင်းသိပ်မစားရတာတော့ အမှန်ပဲ … ။
လွင်ဟိန်း Company ကတော့ Epson ကို မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလည် ယူထားတာထင်တာဘဲ
သူ့ တို့ရဲ့ မင်ရည့် ( ဒိုင်းလင့် ) သုံးရင် မင် error ကို Free ဖြေရှင်းပေးတယ်….
တော်တော် အဆင်ပြေတယ်…. လ်ိပ်စာ အတိအကျ ကိုနောက်ရက် မှ ပြောတော့မယ် မမှတ်မိလို့ ….
တရုတ်က မင်တွေကို တော့ လက်လန်အောင် ကို လန့်တယ်. ခံရပေါင်းများလို့…